Sida La Iskaga Ilaaliyo Duuduubka Ku Yimaada Oogada Sare Ee Jidhka - Daryeel Magazine
Sida caadiga ah jidhku waxa u sameeyaa laalaab waana arin dhibaato ku ah dadka oo ayan jeclayn hadana aad arkaysid in ay dadka qaar la dhibaatoodaan oo ay u taag laa`yihiin gaar ahaan haweenka oo iyagu aan jeclayn in jidhkoodu kogo ama duuduub yeesho iyaga oo doonayana sidii ay iskaga ilaalin lahaayeen.
Si aad uga hortagto Waxad soo qaadanaysaa xoogaa liin banbeelmo ah waxad ku qastaa lim dhanaan waxanad ku dabooshaa weel. Adiga oo aad u qasaya , Mudo aan badnayn ka dib soo maydho adiga oo isticmaalaya saabuun aan lahayn maadooyinka jidhka dhiba.
Adiga oo qalalan soo qaado mulqaacadoo oo ah casiirkii aad qastay kadibna mari jidhkaada una kaadi ilaa mudo 10 daqiiqo ah markaas kadib mar labaad ka soo maydho Balse waxad ka digtoonaa in aa isticmaasho weel caag ah ama macdan ah laakiin waxa fiican weel quraarad ka samaysan.
Hadii aad qaabkaa isticmaasho dhor jeer gaar ahaan xiliyada qabowga caadiga ah oo aan ahayn midka barafka ah waxa jidhkaagu noqon doonaa insha Allah mid jilicsan oo aan lahayn wax duduub ah gacantuna ay ka dareemayso dabacsanaan.
Waxyaabaha kale ee kaa caawin kara inaad jidhkaaga ka ilaalisid duuduubka waxaa ka mid ah inaad hurdo kugu filan seexatid habeen kasta, inaad ka fogaatid cabista sigaarka, inaad badsatid cunista khudaarta iyo kaluunka iyo inaad iska ilaalisid walbahaarka iyo welwelka badan.
Hababka Cayilka La Iskaga Ilaaliyo Ramadaanka Kadib Faa’iidooyinka Saliida Saytuunka Iyo Sida Loogu Qurxiyo Jidhka & Timaha